Backlink - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Azụ azụ maka akụrụngwa webụ enyere bụ njikọ sitere na webụsaịtị ndị ọzọ (onye na-ezo aka) na akụrụngwa webụ ahụ (onye ntụzịaka). Ngwa weebụ nwere ike ịbụ (dịka ọmụmaatụ) webụsaịtị, ibe weebụ, ma ọ bụ akwụkwọ ndekọ aha.
Njikọ azụ bụ ntụaka atụnyere ngụtụ aka. Ọnụ ọgụgụ, ịdịmma, na mkpa nke backlinks maka ibe weebụ so na ihe nchọta ọchụchọ dị ka Google na-enyocha iji chọpụta otú ibe ahụ dịruru mkpa.Page Rank na-agbakọ akara maka ibe weebụ ọ bụla dabere n'otú ibe weebụ niile si ejikọta n'etiti onwe ha, ma bụrụ otu n'ime mgbanwe ndị Google na-eji iji chọpụta otú ibe weebụ kwesịrị ịdị elu na nsonaazụ ọchụchọ. Ịdị arọ nke backlinks a bụ ihe atụnyere nyocha nke akwụkwọ, akwụkwọ ndị ọkà mmụta, na akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ. A nyochala ma mejuputa a Topical PageRank, nke na-enyekwu ibu na backlinks na-abịa site na ibe nke otu isiokwu dị ka ibe ebumnuche.
Ụfọdụ okwu ndị ọzọ maka backlink bụ njikọ mbata, njikọ inbound, inlink, njikọ ime, na ngụta.
Wikis[mezie | dezie ebe o si]
A na-enye njikọ azụ azụ na Wikis, mana ọ na-abụkarị naanị n'ime oke Wiki n'onwe ya yana nkwado ndabere data na-akwado ya. MediaWiki, na-enye ngwa ọrụ "Kedu njikọ ebe a", ụfọdụ Wikis ochie, ọkachasị WikiWikiWeb nke mbụ, nwere ọrụ backlink ekpughere na aha ibe.
Backlinks na search engines[mezie | dezie ebe o si]
Nchọgharị ọchụchọ na-ejikarị ọnụọgụ backlinks nke webụsaịtị nwere dị ka otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa maka ịchọpụta ogo nchọta weebụsaịtị ahụ, ewu ewu na mkpa. Nkọwa nke Google maka usoro PageRank ya (Jenụwarị 1998), dịka ọmụmaatụ, kwuru na "Google na-akọwa njikọ site na ibe A ruo na ibe B dị ka votu, site na ibe A, maka ibe B." Ịma ụdị nke search engine. ogo akwalitela akụkụ nke ụlọ ọrụ SEO nke a na-akpọkarị linkspam, ebe ụlọ ọrụ na-anwa itinye ọtụtụ njikọ inbound dị ka o kwere mee na saịtị ha n'agbanyeghị ọnọdụ saịtị ahụ malitere. Na Jenụwarị 2017, Google wepụtara Penguin 4 update nke wedara omume spam njikọ dị otú ahụ.
Ihe nrịbama njin nchọta pụtara dị elu, a na-ewerekwa ya dị ka ihe dị oke mkpa na azụmahịa n'ịntanetị yana ngbanwe nke ndị ọbịa na webụsaịtị ọ bụla, ọkachasị mgbe a bịara ịzụ ahịa n'ịntanetị.. Nkọwa blọọgụ, ịde blọgụ ndị ọbịa, ntinye akụkọ, nkesa ntọhapụ mgbasa ozi, itinye aka na mgbasa ozi ọha na eze, na ntinye ọgbakọ nwere ike iji mee ka njikọ njikọ dịkwuo elu.
Ebe nrụọrụ weebụ na-ejikarị usoro SEO eme ihe iji mee ka ọnụ ọgụgụ backlinks na-atụ aka na ebe nrụọrụ weebụ ha. Ụzọ ụfọdụ bụ n'efu maka onye ọ bụla ebe ụfọdụ ụzọ, dị ka njikọ njikọ, chọrọ ntakịrị atụmatụ na ịzụ ahịa iji rụọ ọrụ. Enwekwara usoro a na-akwụ ụgwọ iji mee ka ọnụ ọgụgụ backlinks dị na saịtị ezubere iche. Dịka ọmụmaatụ, netwọk blọgụ nkeonwe nwere ike iji zụta backlinks. A na-eme atụmatụ na nkezi ọnụ ahịa ịzụrụ njikọ na 2019 bụ $291.55 na $391.55, mgbe ewepụrụ blọọgụ ahịa na ngụkọ.
Enwere ọtụtụ ihe na-ekpebi uru nke backlink. Azụ azụ sitere na saịtị ndị nwere ikike na isiokwu enyere bara oke uru. Ọ bụrụ na saịtị abụọ ahụ na ibe nwere ọdịnaya echere maka isiokwu ahụ, a na-ewere backlink dị mkpa ma kwenye na ọ nwere mmetụta siri ike na nhazi ọchụchọ nke ibe weebụ nyere backlink. Njikọ azụ na-anọchi anya 'votu editọ' dị mma maka ibe weebụ na-enweta site na ibe weebụ ọzọ na-enye. Ihe ọzọ dị mkpa bụ ederede arịlịka nke backlink. Ederede arịlịka bụ akara nkọwa nke hyperlink dị ka ọ dị na ibe weebụ. Bots search engine (ya bụ, spiders, crawler, wdg) nyochaa ederede arịlịka iji nyochaa otú o si daba na ọdịnaya dị na ibe weebụ. Enwere ike ịmepụta backlinks site na ntinye akwụkwọ, dị ka ntinye akwụkwọ ndekọ aha, ntinye akwụkwọ, ntinye aha ọha, ndepụta azụmahịa, ntinye blọgụ, wdg. Ederede arịlịka na ibe weebụ ọdịnaya congruency bụ nke ukwuu arọ na search engine results page (SERP) nke a webpage n'ihe banyere ajụjụ isiokwu ọ bụla nyere site n'aka onye ọrụ search engine.[citation need]
Mgbanwe na algọridim nke na-emepụta ọkwa nchọta ọchụchọ nwere ike itinye uche dị elu na mkpa maka otu isiokwu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ backlinks nwere ike isi na isi mmalite nwere metrik bara uru nke ukwuu, ha nwekwara ike enweghị njikọ na ajụjụ ma ọ bụ mmasị nke ndị ahịa. Ihe atụ nke a ga-abụ njikọ sitere na blọọgụ akpụkpọ ụkwụ na-ewu ewu (nwere metrics bara uru) na saịtị na-ere ihe ncha pensụl vintage. Ọ bụ ezie na njikọ ahụ na-egosi na ọ bara uru, ọ na-enye obere onye na-azụ ahịa n'ihe gbasara mkpa.
↑ a href backlink checker (en-US). learn4everything.online (2021-03-28). Retrieved on 2022-01-04.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Backlink&oldid=71988
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 4 Ọnwa mbụ 2022, mgbe 09:53